बालकोटमा पाकेको खिचडी र प्रचण्डको एकान्तवास | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
बालकोटमा पाकेको खिचडी र प्रचण्डको एकान्तवास
उक्त खिचडी पुस मसान्तभित्रै पस्किने गरी तयार भएको हो या अझै केही दिन पकाउनुपर्ने हो ? पुसमाघको ठिहीले यत्तिकै सेलाएर जान्छ, त्यो हेर्न भने प्रतीक्षा नै
२०७८ पुष २५, आईतवार १८:३०:००
काठमाडौँ । पुनर्स्थापित संसदमा भइरहेको चार महिनादेखिको गतिरोध अन्त्य र एमसीसी अनुमोदनको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पहिलोपल्ट शनिबार एक्लाएक्लै वार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा बालकोटस्थित ओलीको निवासमै पुगेर एकान्त वार्ता गर्न पुग्दा राम्रै खिचडी पाकेको हुन सक्ने संकेत मिलेका छन् ।
उक्त खिचडी पुस मसान्तभित्रै पस्किने गरी तयार भएको हो या अझै केही दिन पकाउनुपर्ने हो ? पुसमाघको ठिहीले यत्तिकै सेलाएर जान्छ, त्यो हेर्न भने प्रतीक्षा नै गर्नुपर्छ ।
कस्तो पाक्यो खिचडी ?
प्रधानमन्त्री देउवाले शनिबार बिहान भेट्न आउने भन्दै अघिल्लै दिन ओलीसम्म खबर पुर्‍याइसकेका थिए । सोहीअनुरुप बिहान साढे १० बजे देउवा भक्तपुरको बालकोटस्थित ओली निवास पुगे। ओली प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत र विदाइ गर्न गाडीसम्मै आइपुगेका थिए । यसले उनीहरुबीच पर्याप्त हार्दिक र अन्तरंग वार्ता भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
भदौ २३ यता एमालेले संसदमा अवरोध गरिरहेको छ। आफूले कारबाही गरेका १४ सांसद संसदमा रहेसम्म सदन चल्न नदिने उसको अडान छ। साथमा आफ्ना माग सम्बोधनमा सत्ता पक्षले कुनै चासो दिएन भन्ने गुनासो पनि एमालेको रहँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले पुस ४ मा संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वदलीय बैठक नै डाकेका बेला एमाले उपस्थित थिएन । त्यहाँ एमाले फुटाएर बेग्लै पार्टी बनाएका माधव नेपालको मुख हेर्नु नपरोस् भनेर ओलीले जानीबुझीकनै बहिष्कार गरेका थिए । त्यसअघि सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको बैठकम पनि ओलीले यसैगरी बहिष्कार गरेका थिए ।
यसबीचमा देउवाले आफ्ना दूतका रुपमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक समन्वय समिति संयोजक रामचन्द्र पौडेललाई पनि ओलीकहाँ पठाएका थिए । तर उनीहरुसँगको भेटमा ओली खासै लचक नदेखिएपछि सत्ता गठबन्धनको बैठकमै देउवालाई आफैं बालकोट जान सुझाव दिइएको थियो। सोही सुझावबमोजिम ओलीलाई मनाउन बालकोट पुगेका हुन्।
भेटमा प्रधानमन्त्रीले दुईवटा मुख्य विषय अघि सारे ।
एक- संसद अवरोध अन्त्य ।
दुई- एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग ।
सत्ता गठबन्धले संसदको अवरोध हटाउन पहल गर्न देउवालाई बालकोट पठाए पनि देउवाले भने भेटलाई एमसीसी अनुमोदनको वातावरण बनाउने अवसरका रुपमा समेत प्रयोग गर्न खोजे । ओलीनिकट नेताका अनुसार भेटमा 'प्रधानमन्त्री देउवाले यही अधिवेशनबाट एमसीसी पास गराउनु पर्‍यो, सहयोग गरिदिनूस्' भनेर प्रस्ताव राखेका थिए। जवाफमा अध्यक्ष ओलीले आफू प्रतिपक्षमा रहेको र यो विषयमा सरकार नै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।
विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीको पद उपहार पाएका देउवामाथि संसदलाई बिजनेस दिन नचाहेको र एमालेलाई संवादमा ल्याउन नखोजेको आरोप छ। यही आरोप चिर्न पनि उनी ओलीलाई भेट्न चाहन्थे। भेटमा उनले अवरोध हटाउन आग्रह पनि गरे। एमसीसी अनुमोदन गराउने र संसद अवरोध हटाउने विषयमा ओली टसमस नभएपछि देउवाले अन्य विषय निकालेर ओलीलाई मनाउने कोशिस गरेका छन्।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि एमालेको आँखा छ । यो विषयले पनि छलफलमा प्रवेश पाएको छ। जसमा प्रधानमन्त्री देउवाले यो सामान्य विषय रहेको भन्दै सहमतिमा गर्न सकिने जवाफ दिएका थिए। स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभाको चुनावका सन्दर्भमा भने दुवैले केहीबेर ठट्यौली मात्र भयो । वार्तामा गम्भीरताको अभावले दुवै पक्ष यसप्रति गम्भीर छैनन् भन्ने सन्देश जान्छ ।करिब १ घण्टाको भलाकुसारीपछि दुवै नेता सहज भावभंगीमा बाहिरिए। ओलीले हात हल्लाउँदै देउवालाई विदा दिए। बालकोटबाट देउवा केही नबोली निस्किए भने ओलीले चिसो प्रतिक्रिया दिए । तत्काल यसको नतिजा आउला या नआउला, तर राजनीतिक निकास निकाल्ने हो भने यिनै दुई दल छलफलमा जुट्नुपर्छ । एउटा भेटले नभए बारम्बार भेटिरहनुपर्छ ।
सत्ता गठबन्धनका अरु घटकहरु प्रधानमन्त्री देउवा र प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्षबीच भेट हुनै नहुने, छोइछिटो बार्नुपर्नेजस्ता सोच राख्छन् । उनीहरू परजीवी र बिचौलिया मनःस्थितिबाट ग्रस्त छन् । उनीहरुको आफ्नो स्ततन्त्र अस्तित्व, पहिचान र साख छैन । कांग्रेसको बुइँ चढेर राजनीतिक गुजारा चलाउन बाध्य छन् । त्यसैले पनि एमाले र कांग्रेस सकेसम्म नभेटिदिए हुन्थ्यो, नमिलिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनोदसा माधव नेपाल र प्रचण्डहरुमा देखिन्छ । यी दुई शक्तिले बीचमा खेल्ने अवसर पाएसम्म मुलुकले निकास पाउँदैन ।
गतिला वा अगतिला जे भए पनि बहुसङ्ख्यक नेपालीले पत्याएका दल कांग्रेस र एमाले नै हुन् । त्यसैले निकास दिने पनि यिनै दुई दलले हो । यिनै दुई दलको निर्णय नै राष्ट्रको निर्णय हुन्छ । यिनकै निर्णयले मात्र वैधता र जनअनुमोदन प्राप्त गर्न सक्छ । तसर्थ राजनीतिक निकास र एमसीसीको गाँठो फुकाउनसमेत कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । प्रचण्ड एकान्तवासबाट नबाहिरिँदै एमाले र कांग्रेस एउटा ठोस समझदारी र निष्कर्षमा पुग्न सकेमा देशले राहत पाउनेछ । होइन भने अरु कति समय अन्योल, अनिश्च, अस्थिरता र अनिर्णयको बन्दी बन्नुपर्ने हो, ठेगान छैन ।